बुधवार, जेठ १४, २०७७ १०:१४:४२ Wednesday, 27 May, 2020
ललितपुर । स्थानीयतहको निर्वाचन भएको झण्डै ३ वर्ष पुग्न लाग्दैछ । अहिले स्थानीयतहका जनप्रतिनधिहरु विभिन्न कामहरु गरिहेका छन् । यस्तै संघीय राजधानीभित्र रहेको ललितपुर महानगरपालिका पनि एक स्थानीयतह हो। त्यही ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्वर ५ का वडा अध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठसँग वडाले गरेका विकास निर्माणका कामहरु, वडाका सस्याहरुमा केन्द्रीत रहेर नामी साप्ताहिकले गरेको कुराकानीको संपादित अंश प्रस्तुत छ ।
नामी साप्ताहिकमा स्वागत छ ?
वडा सरकार प्रमुख भएर ललितपुर महानगरपालिका ५ मा के के काम गर्नु भयो ?
जनप्रनिधिविहीन भएको २० वर्ष भएको थियो । त्यो २० वर्ष भएको चुनावमा हामीले घोषणा पत्र लिएर चुनावमा गएका थियौं। त्यो घोषणा पत्रमा लेखिएका र बोलेका जुन-जुन काम थिए । त्यो भन्दा बढी गर्न सफल भएका छौ।
ललितपुर महानगरपालिका ५ चाही सफा सुन्दर स्वच्छ, हरभरा, धुलो धुवाँ रहितको सुरक्षित वडा र संस्कृति सहितको सम्पदा भनेर चिनाउने काम गरिरहेका छौ । विभिन्न सरसफाईका कामहरु गरिरहेका छौ । यही अन्र्तगत हामीले सफाईको लागि विभिन्न ठाँउमा बृक्षारोपण कार्यक्रम गरिरहेका छौ ।
सफाईको लागि डस्विन राख्ने कामहरु गरिरहेका छौ। वडामा ३ जना सफाई अभियन्ताहरु राखेर दैनिक सरसफाई गरिरहेका छौ। हामी आउँदा धेरै ठाउँमा पिच गर्न बाँकी थियो। अव मात्र २ ठाँउँमा बाँकी छ। त्यो पनि यस वर्ष गर्नेछौ। महालक्ष्मी मन्दिर लगायत सबै संस्कृति सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नेतर्फ लागी परेका छौ। जहाँ जुन अवस्थामा पहिला थियो । त्यस मन्दिरलाई मास्टर प्लान(बिस्तृत योजना) अन्र्तगत सुन्दर सफा गरेका छौ। हामीले ललितपुर महानगरपालिकामा ५ मा विभिन्न कामहरु गरिरहेका छौ ।
भनेपछि घोषणा पत्रको आधारमा कामहरु गरिरहनु भएको छ ?
घोषणा पत्रको कामहरु सकेर पनि अहिले अन्य कामहरु गरिरहेका छौ ।
तपाईको घोषणा पत्रमा लेखिएका कामहरु कार्यकाल नसकिदै सकियो ?
वास्तवमा सकिएका छन् ।
घोषणा पत्रमा लेखिएका मुख्य कामहरु सम्झिदिनुहोस् त ?
घोषणा पत्रमा लेखिएका मुख्य कामहरु यस्ता थिए । हामी हरियाली बनाउँछौ । संस्कृति सम्पदाहरु जर्गेना गछौ। महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिकको लागि एउटा प्याकेजिङ कार्यक्रमरु ल्याउँछौ। यहाँ भएका संस्कृति सम्पदा, पिच, ढल बनाउने काम गछौ । शान्ति सुरक्षा लगायतका अन्य कामहरु गर्छ भनेर लेखिएको थियो।
धेरै कामहरु गरिसकेको छु, भन्नु भयो । तर, तपाईको वडामा धुलो, धुवाँ र हिलोको समस्या अझै पनि देखिन्छ नि ?
मेरो ५ नम्वर वडामा चाँही मानभवन क्षेत्रमा २५ लाखको ढल खन्दैछु । जहाँ पिच पनि हुँदैछ। नारायणभवनमा त्यहाँ पनि काम हुँदैछ। यति भन्छुकी मेरो वडाको दुई ठाँउमा पिच भएपछि माटो भेटिदैन।
घोषणा पत्रमा पनि नलेखिएका तर, तपाईले गर्नु नै पर्ने अनि गर्न नसकेका कामहरु के के हुन ?
घोषणा पत्रमा नलेखिएका तर, गर्नै पर्ने कामहरु भनेको शान्ति सुरक्षाको लागि वडा भरी सिसीटिभीहरु राखेका छौ। वडाभरी सिसीटिभी भएपछि अपराधहरु घट्ने छ । वडाभरी विद्युत पुर्याएका छौ। वडा भवन बनाउनु पर्ने समस्या छ। त्यसको लागि म लागि परेको छु । वडा कार्यालय भवन बनाउनु पर्नेछ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा ५ मा धेरै जग्गा पनि छैन । मानभवनस्थित जग्गा छ। त्यही बहुउदेश्य सहितको भवन बनाउनु पर्ने लक्ष्य छ । त्यो काम केही समस्याले रोकिएको छ । तर, समस्याको समाधान गर्दै भवन बनाउने लक्ष्य छ।
तपाईको अनुभवमा काम गर्दै जाँदा नीतिगत समस्याहरु के के आए ?
नीतिगत समस्या आउँछन् । जस्तै सडक फराकिलो बनाउने क्रममा समस्याहरु भोगेको छ। जुन रिङरोड चक्रपथको काममा टहरा, घरहरु भत्काउने काममा मैले मुद्धा खेप्नु पर्यो। तर, भत्काई पनि छाडेको छु।
सिंहदरवारको अधिकार घर-घरमा भन्ने जुन नारा छ । त्यो व्यवहारमा छैन् । हामीलाई अधिकार प्रशस्त दिइएको छ। तर, काम गर्न नीतिगत समस्याहरु धेरै छन्। सिंहदरबारले होइन। हामी वडालाई काम गर्न महानगरले पनि रोक्न सक्ने अवस्था छ। विकास निर्माणका काम गर्न खरिद ऐनकै कारण पनि समस्या भोग्नु परेको छ।
खरिद ऐनले पनि वडा सरकार समस्यामा परेको छ ?
समस्यामा परेको छ । अहिले हामीले कुनै काम गर्न लगायौं भने ज्यामीको ज्याला १ दिनको ७ सय लेखिएको छ। तर, अहिले बजारमा ७ सय ज्याला दिएर मजदुर पाइदैन् । हामीलाई थाहा छ, ज्यामी १२ सय वा १३ सय नदिइकन पाइदैन्। खरिद ऐनमा लेखिएको निर्माण सामानहरुको पनि मूल्य मिल्दैन् । खरिद ऐनले स्थानीय सरकार समस्यामा परेको छ। त्यही भएकाले हामीले खरिद ऐनको विषयमा महानगरपालिकामा कुराहरु राखेका छौ । त्यो संशोधन गर्न जरुरी छ। अहिलेको समय सापेक्ष छैन।
खरिद ऐन लगायतले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नआएको गुनासो गर्नु भयो ? खासमा कुन कुन अधिकार वडामा आएनन् ?
वडा अध्यक्षलाई सम्पूर्ण अधिकारी भनिएको छ । तर, वडा अध्यक्षले निर्र्णय गरेर काम गर्दा पनि ठाँउ-ठाँउबाट रोकिएको अवस्था छ । त्यस्ता कामहरु नरोकि दिए हुुन्थ्यो भन्नको लागि मैले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ आएन भनेको हुँ।
तपाईको वडामा खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौंमा खानेपानीको जस्तो समस्या छ । मेरो वडामा त्यही समस्या छ । मेरो वडाको ४० प्रतिशत स्थानमा पानी नै आउँदैन्। मेलम्चीको पानी आयो भने पानी पुग्छ । खानेपानीको लागि पहल गरिहेका छौ। मेरो वडामा १० प्रतिशत स्थानमा ट्याङकरको पानी र अन्य स्थानमा इनारको पानी प्रयोग हुँदै आएको छ । खानेपानीको समस्या मेलम्ची नआइकन हुँदैन।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन । जुन मेलम्ची आयोजना छिट्टै सम्पन्न गर्न काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले दबाव दिन पनि सक्नु हुन्थ्यो । तर, किन गर्न चाहानु हुन्न ?
आउँछ, आउँछ भन्ने हल्ला भएको धेरै भयो । मेलम्चीले काठमाडौंका सडक बिगार्ने मात्र काम भएको छ। मेलम्ची छिट्टै ल्याउन महानगरपालिका र नगरपालिकाहरु एक भएर दवाव दिन सकेका छैनौं । सवै लाईन एजेन्सी(सम्बन्धित पक्ष) लाई राखेर तपाइहरुले गर्नु पर्ने छिटो गर्नुहोस् भनेर पहल गर्न सकेका छैनौं । पहल गर्नको लागि आवाज उठाउँदै आइरहेका छौ। अझै पनि मेलम्चीको पानी आउँछ भनेर हामीलाई विश्वास छैन् । हामी काठमाडौंका सडक पिच गर्छौ। मेलम्चीले आएर भत्काउने काम मात्र भएको छ।
काठमाडौंका सडक एउटाले बनाउने र अर्कोले भत्काउने काम भइरहेको छ। विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोनका तार भूमिगत गर्ने नाममा होस्, खानेपानीका पाइप बिच्छ्याउँदै पुर्ने काममा होस्। ढल नाला बनाउने योजनामा होस्। यसलाई रोक्न सवै सरोकारवालाहरुले एकद्वार प्रणालीबाट काम किन गर्नु सक्नु भएको छैन वा दिर्घकालिन रुपमा विकास निर्माणका काम किन हुन नसकेका हुन् ?
काठमाडौंका विकास लागि लाईन एजेन्सीहरुको (विभिन्न प्रकारका सम्बन्धित निकाय) जुन समन्वय हुनु पर्ने हो। त्यो छैन्। खानेपानीको पाइप बिच्छउँदा, टेलिफोन, विद्युत लगायतका तारलाई भुमिगत गर्दा वा ढल नाला निर्माण गर्दा सवै निकायको समन्वय भएर काम गर्दा धेरै राम्रो हुने थियो । समन्वयको अभावले जो आउँछ। उसैले भत्काउने काम भइरहेको छ। यसलाई रोक्न पहल चाही भइरहेको छ । हामीले रोक्नु पर्छ । पिच गरेपछि पिच फोड्न पाइदैन्।
अन्तमाः तपाईको कार्यकाल सकिदा ललितपुर महानपालिका ५ को कस्तो अनुहार हुन्छ ?
मेरो कार्यकाल सकिदा मेरो वडा स्वच्छता हराभरा भएको धुवाँ धुलो रहितको वडा बन्छ। सुरक्षाको लागि सिसीटिभी भएको हुन्छ। सवै वस्तीमा विद्युत पुग्छ । संस्कृति सम्पदाको लागि गर्नु पर्ने कामहरु हुन्छन्। खानेपानी, स्वास्थ्यमा कामहरु हुन्छन्। बहुउदेश्यीय वडा भवन बनाउँछौ । वडाले अधिकार पाएका सम्पूर्ण कामहरु गर्नेछु।
प्रकाशित मिति: शनिवार, चैत्र ८, २०७६, १०:०३:००